တငျပါးဆုံအတှငျး ကွှကျသား သနျမာစသေညျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးမြား – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
တငျပါးဆုံအတှငျး ကွှကျသား သနျမာစသေညျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးမြား
သငျဟာ ဆီးသှားခငျြစိတျပျေါလာရငျ မထိနျးနိုငျဘဲ ခကျြခငျြး အိမျသာကို တနျးပွေးရသူ…. ခြောငျးဆိုးရငျ နှာခရြေငျ ဆီးမထိနျးနိုငျဘဲ ထှကျကသြူတဈယောကျလား? ဒီလိုဆိုရငျတော့ ငှကေုနျကွေးကွလဲ မရှိဘဲ သဘာဝနညျးလမျးနဲ့ သငျ့ကို အကောငျးဆုံးကူညီပေးနိုငျမယျ့ kegel exercise လို့ချေါတဲ့ …တငျပဆုံအတှငျးကွှကျသား သနျမာစတေဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှရှေိပါတယျ…။
Kegel exercise ဆိုတာ…..
တငျပဆုံရိုးခှငျရှိတဲ့နရောရဲ့ အောကျခွမှော ကွှကျသားအလှာတှရှေိပွီး ဒီကွှကျသားတှကေ တငျပဆုံရိုးရဲ့ အရှေ့ အနောကျနဲ့ ဘေးတဈဖကျတဈခကျြစီမှာ တှယျဆကျထားပါတယျ..။ kegel exercise ဆိုတာ ဒီကွှကျသားတှကေို သနျမာအောငျလုပျတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးပါ…။
တငျပဆုံအတှငျးကွှကျသားတှေ လြော့လြဲစတေဲ့ အကွောငျးတရားတှအေနနေဲ့ အမြိူးသမီးတှမှော… ကိုယျဝနျဆောငျခွငျး ကလေးမှေးဖှားခွငျးနဲ့ အသကျအရှယျကွီးရငျ့ခွငျး ကိုယျအလေးခြိနျတိုးလာခွငျး စတာတှရှေိပါတယျ..။
အမြိူးသားတှမှောဆိုရငျလဲ အသကျကွီးခွငျး ဆီးကွိတျခှဲစိတျမှူလုပျထားခွငျး စတာတှကွေောငျ့ တငျပဆုံအတှငျးကွှကျသားတှေ အားနညျးစနေိုငျပါတယျ…။
တငျပဆုံအတှငျးကွှကျသားတှကေ သားအိမျ… ဆီးအိမျနဲ့ အူတှကေို ထောကျပံ့ပေးထားတာပါ..။
ဒီကွှကျသားတှေ အားနညျးတဲ့အခါ အကြိူးဆကျအနနေဲ့ ဆီးမထိနျးနိုငျတာ ဝမျးမထိနျးနိုငျတာနဲ့ မိနျးမကိုယျအတှငျးကို တငျပဆုံမှာရှိတဲ့ ကိုယျတှငျးအင်ျဂါတှေ ကြှံဝငျလာရငျ မိနျးမကိုယျမှာ မသကျမသာဖွဈခွငျးတှေ ကွုံရနိုငျပါတယျ..။
ဒါကွောငျ့ တငျပဆုံအတှငျးကွှကျသားတှေ သနျမာအောငျလုပျခွငျးအားဖွငျ့ ဒီလက်ခဏာတှကေို သကျသာစနေိုငျမှာဖွဈပါတယျ…။
နညျးလမျးကတော့ ရိုးရှငျးပါတယျ…။ သငျဆီးသှားနခြေိနျမှာ ဆီးကို ရုတျတရကျ ရပျလိုကျပါ…။ ဆီးရပျသှားတယျဆိုရငျ တငျပဆုံအတှငျးကွှကျသားမှနျပါတယျ..။
ဒီကွှကျသားတှေ ဘယျနရောမှာရှိသလဲ သိရှိခံစားမိပွီဆိုရငျ ကွှကျသားတှကေို ငါးစက်ကနျ့ကွာအောငျ ကြုံ့ထားပါ…။ နောကျ ငါးစက်ကနျ့လောကျ နားပါ…။ ဒီလိုမြိူး တနကေို့ လေးကွိမျကနေ ငါးကွိမျလောကျ ကြုံ့လိုကျ နားလိုကျလုပျပါ..။ အကငျြ့ရလာပွီဆိုရငျ ဆယျ့စက်ကနျ့ကွာအောငျ ကြုံ့… ဆယျစက်ကနျ့နား စသဖွငျ့ တိုးလုပျသှားပါ..။
အစပိုငျးမှာအိပျရာပျေါမှာ လှဲပွီးလုပျရငျ ပိုမိုလှယျကူပမေယျ့ နောကျပိုငျးအကငျြ့ရလာတဲ့အခါ ထိုငျရကျ နဲ့လဲ လုပျနိုငျလာပါလိမျ့မယျ…။
မိမိအိမျမှာသာမက ဘယျအခြိနျဘယျနရောမှာမဆို kegel exercise ကို လုပျနိုငျပါတယျ..။
သငျသာ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို မှနျမှနျလုပျမယျဆိုရငျ ရကျသတ်တပတျအနညျးငယျကနေ လအနညျးငယျအတှငျးမှာပဲ အကြိူးရလာဒျတှကေို ခံစားရရှိမှာပါ…။ ဥပမာ ဆီးပိုထိနျးလာနိုငျတာမြိူး စတဲ့ ရလာဒျတှကေို သငျရရှိလာပါလိမျ့မယျ…။
တင်ပါးဆုံအတွင်း ကြွက်သား သန်မာစေသည့် လေ့ကျင့်ခန်းများ
သင်ဟာ ဆီးသွားချင်စိတ်ပေါ်လာရင် မထိန်းနိုင်ဘဲ ချက်ချင်း အိမ်သာကို တန်းပြေးရသူ…. ချောင်းဆိုးရင် နှာချေရင် ဆီးမထိန်းနိုင်ဘဲ ထွက်ကျသူတစ်ယောက်လား? ဒီလိုဆိုရင်တော့ ငွေကုန်ကြေးကြလဲ မရှိဘဲ သဘာဝနည်းလမ်းနဲ့ သင့်ကို အကောင်းဆုံးကူညီပေးနိုင်မယ့် kegel exercise လို့ခေါ်တဲ့ …တင်ပဆုံအတွင်းကြွက်သား သန်မာစေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေရှိပါတယ်…။
တင်ပဆုံရိုးခွင်ရှိတဲ့နေရာရဲ့ အောက်ခြေမှာ ကြွက်သားအလွှာတွေရှိပြီး ဒီကြွက်သားတွေက တင်ပဆုံရိုးရဲ့ အရှေ့ အနောက်နဲ့ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာ တွယ်ဆက်ထားပါတယ်..။ kegel exercise ဆိုတာ ဒီကြွက်သားတွေကို သန်မာအောင်လုပ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပါ…။
တင်ပဆုံအတွင်းကြွက်သားတွေ လျော့လျဲစေတဲ့ အကြောင်းတရားတွေအနေနဲ့ အမျိူးသမီးတွေမှာ… ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း ကလေးမွေးဖွားခြင်းနဲ့ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ခြင်း ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာခြင်း စတာတွေရှိပါတယ်..။
အမျိူးသားတွေမှာဆိုရင်လဲ အသက်ကြီးခြင်း ဆီးကြိတ်ခွဲစိတ်မှူလုပ်ထားခြင်း စတာတွေကြောင့် တင်ပဆုံအတွင်းကြွက်သားတွေ အားနည်းစေနိုင်ပါတယ်…။
တင်ပဆုံအတွင်းကြွက်သားတွေက သားအိမ်… ဆီးအိမ်နဲ့ အူတွေကို ထောက်ပံ့ပေးထားတာပါ..။
ဒီကြွက်သားတွေ အားနည်းတဲ့အခါ အကျိူးဆက်အနေနဲ့ ဆီးမထိန်းနိုင်တာ ၀မ်းမထိန်းနိုင်တာနဲ့ မိန်းမကိုယ်အတွင်းကို တင်ပဆုံမှာရှိတဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေ ကျွံဝင်လာရင် မိန်းမကိုယ်မှာ မသက်မသာဖြစ်ခြင်းတွေ ကြုံရနိုင်ပါတယ်..။
ဒါကြောင့် တင်ပဆုံအတွင်းကြွက်သားတွေ သန်မာအောင်လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဒီလက္ခဏာတွေကို သက်သာစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်…။
နည်းလမ်းကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်…။ သင်ဆီးသွားနေချိန်မှာ ဆီးကို ရုတ်တရက် ရပ်လိုက်ပါ…။ ဆီးရပ်သွားတယ်ဆိုရင် တင်ပဆုံအတွင်းကြွက်သားမှန်ပါတယ်..။
ဒီကြွက်သားတွေ ဘယ်နေရာမှာရှိသလဲ သိရှိခံစားမိပြီဆိုရင် ကြွက်သားတွေကို ငါးစက္ကန့်ကြာအောင် ကျုံ့ထားပါ…။ နောက် ငါးစက္ကန့်လောက် နားပါ…။ ဒီလိုမျိူး တနေ့ကို လေးကြိမ်ကနေ ငါးကြိမ်လောက် ကျုံ့လိုက် နားလိုက်လုပ်ပါ..။ အကျင့်ရလာပြီဆိုရင် ဆယ့်စက္ကန့်ကြာအောင် ကျုံ့… ဆယ်စက္ကန့်နား စသဖြင့် တိုးလုပ်သွားပါ..။
အစပိုင်းမှာအိပ်ရာပေါ်မှာ လှဲပြီးလုပ်ရင် ပိုမိုလွယ်ကူပေမယ့် နောက်ပိုင်းအကျင့်ရလာတဲ့အခါ ထိုင်ရက် နဲ့လဲ လုပ်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်…။
မိမိအိမ်မှာသာမက ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာမဆို kegel exercise ကို လုပ်နိုင်ပါတယ်..။
သင်သာ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို မှန်မှန်လုပ်မယ်ဆိုရင် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကနေ လအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ အကျိူးရလာဒ်တွေကို ခံစားရရှိမှာပါ…။ ဥပမာ ဆီးပိုထိန်းလာနိုင်တာမျိူး စတဲ့ ရလာဒ်တွေကို သင်ရရှိလာပါလိမ့်မယ်…။